ယူအေအီး၌သင်တို့၏အိပ်မက်ဟာဘဝအတှကျအဗီဇာအတည်ပြု Follow3ခြေလှမ်းများ
ဗီဇာအတည်ပြု - ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းတစ်ဦးအသက်တာသစ်အနိုင်ရခဲ့ကြသောသင်အကြောင်းကြားချင်ပါတယ်!
သငျသညျဒူဘိုင်းမှဗီဇာအတည်ပြု Won ပွီ!
သငျသညျဒူဘိုင်းရန်သင့်မိသားစုနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ဖို့ option ရှိသည်
စာတိုက် / ZIP ဖိုင်ကုဒ်
သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ID ကို 's Page (မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံ) ၏မိတ္တူ
သင့်ရဲ့ ID ကိုနံပါတ် (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ် Drivig လိုင်စင်)
ဗီဇာန်ဆောင်မှုများ (အောက်ပါ options တွေကိုတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ)
$ 29.99 ဗီဇာ + ယောဘသည် 60 ရက်အတွင်း + ငွေ Back ကိုအာမခံရှာဖွေခြင်း
$ 19.99 ဗီဇာလျှောက်လွှာ + လုပ်ငန်းခွင်အာမခံ
$ 9.99 ဗီဇာလျှောက်လွှာ + အတည်ပြု
* Next ကိုကလစ်လုပ်ပါနှင့်ဗီဇာ & နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီဘို့ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏အသေးစိတျကို update ပေးပါ။ သင်, Will, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဗီဇာနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအဘို့အစိစစ်ပြီးလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် Frontside (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်) ၏ရုပ်ပုံ၏သာဓက
ဒူဘိုင်းမှနေရာပြောင်းရွှေ့ - နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?
အခုတော့ငါတို့အဖွဲ့ဒီတော့သင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကျင်းအီးမေးလ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသုံးသပ်ပြီးနောက်, သင်ပိုမိုများအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်ကျေးဇူးပြုပြီး နေရာပြောင်းရွှေ့သတင်းအချက်အလက်များ။ သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်ရန်သင့်အသေးစိတ်ကိုအပေါငျးတို့သဆက်ပြောသည်ရှိသည်ဟုသေချာအောင်ဆက်လက်မပြုမီ။ သာ3သငျသညျ, နောကျလိုသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအတည်ပြုရန်တစ် CV ကို upload တင်ပြီးတော့သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပျအတှကျအာမခံလုပ်ငန်းများ၏ပါလိမ့်မည်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ရမယ်လိုက်ပြီးရှိပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းကူးပျံသန်းဖို့ကူညီဖို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ကြပြီး ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်ဆင်းသက်လိမ့်မည်ဟုထက်ပို 100% သေချာ.
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကို Check ပေးပါ!